यी चीजहरूलाई सिरानी मुनि राखेर सुत्दा खुल्नेछ भाग्य ! - यी चीजहरूलाई सिरानी मुनि राखेर सुत्दा खुल्नेछ भाग्य ! -
यी चीजहरूलाई सिरानी मुनि राखेर सुत्दा खुल्नेछ भाग्य !
उज्यालो प्रतिनिधि १० फाल्गुन २०७७, सोमबार शिक्षा
काठमाडौँ । धेरै चोटि समस्याहरूले हामीलाई घेर्छ र आरामको अभावका कारण व्यक्ति राति निदाउँछन् । तर यदि तपाईंले केही घण्टाको लागि मानसिक शान्ति प्राप्त गर्नुभएन भने, भोलिपल्ट मात्र व्यक्तिको मुड खराब हुँदैन, साथै काम गर्ने जस्तो महसुस पनि गर्दैन र समस्याहरू कम हुनुको सट्टा बढ्दछ।
ज्योतिष र वास्तु शास्त्रले यो पनि भनेका छ कि यदि व्यक्तिले निदाएको बेलामा केही चीज राख्छ भने त्यसले राम्रो र आरामदायी निद्रा मात्र ल्याउदैन तर जीवनमा कुनै समस्या पनि आउँछ यदि चलिरहेको वा आर्थिक समस्या भएमा समाधान गर्न यसले मद्दत गर्दछ ।
– यदि बच्चा सुतिरहेको बेला डराउँछ, स्तब्ध हुन्छ वा निद्रामा कराउन थाल्छ, त्यसपछि बच्चाको तकिया मुनि चक्कु वा फलामको केही चीज राख्नुहोस्। यसो गरेर, नकारात्मक उर्जा बच्चामा पुग्न रोक्न सकिन्छ र बच्चा रातभर आरामसँग निदाउन सक्छ । बच्चासँग मात्रै होइन, यदि वयस्क व्यक्तिको सुतिरहेको बेलामा खराब विचारहरू आइरहेको छ वा यदि तपाईं सपना देख्नुहुन्छ भने, तब चक्कु, कैंची वा फलामलाई तकिया मुनी राख्नुहोस्।
– यदि तपाईको दिमागमा कुनै किसिमको डर वा चिन्ता छ भने, तपाईले सपना देख्नुहुन्छ, शान्त नभएको कारण तपाई निद्रामा हुनुहुन्न भने रातमा सुत्नु अघि हनुमान चालीसाको पाठ गर्नुहोस् र हनुमान चालीसालाई सिरानीमा राख्नुहोस् ।
-लसुन पनि राम्रो भाग्यको प्रतीक मानिन्छ । यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं सुत्ने समयमा तपाईंको तकिया मुनि लसुनको कलियोंसहित सुत्न सक्नुहुन्छ। यो गरेर, सकारात्मक उर्जा व्यक्ति वरिपरि प्रसारित हुन्छ र नकारात्मक उर्जा हटाएर, यसले राम्रो निद्रा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, त्यसो गर्दा दिमागमा नकारात्मक विचारहरू हुँदैन।
– सुत्ने समयमा सौंफको दानालाई तकियामुनि राख्दा निद्राले राहू दोष हटाउँदछ, रातीको सपना र मानसिक समस्याबाट छुटकारा दिन्छ र यस उपचारले राहुको खराब प्रभावलाई पनि कम गर्दछ। यस बाहेक, तकिया मुनिको हरी इलायची (इलायची) सुत्नाले व्यक्तिलाई निद्रामा सुत्न मद्दत गर्दछ।